यसरी निको हुन्छ पायल्स - ज्ञानविज्ञान
मेडिकल भाषामा पायल्सलाई हेमोरोइटर्स भनिन्छ । पायल्सको तीन चरण हुन्छ । पहिलो चरण भनेको दिसामा रगत देखापर्नु, दोस्रोे दिसासँगै अन्य केही वस्तु आएजस्तो भान हुनु र दिसा गर्दा मलद्वारबाट मासु नै बाहिर निस्कनु । यस्तो बाहिर निस्केको भाग दिसा गरेपछि भित्र पस्ने हुन्छ । तेस्रो भनेको दिसा गर्दा बाहिर निस्किएको मासु भित्र पस्दैन । यस्तो अवस्था तुलनात्मक रूपमा बढी जटिल हुन्छ । यसरी गर्न सकिन्छ पायल्सको उपचार :
डा. लोचन कार्की, जनरल फिजिसियन
दिसा साह्रो भएको छ वा नियमित दिसा गर्न समस्या छ भने औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दिसालाई नरम बनाउने औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पायल्स पहिलो अवस्थामा हुँदा त्यस्तो कुनै मेडिकल उपचार गर्नुपर्दैन । सर्जिकल अवस्थामा पनि जानु पर्दैन ।
यस्तो अवस्थामा रक्तनलीहरू बाहिर निस्किएको हुन्छ । सामान्य अवस्थामै थोरै उपचार गर्दा पनि त्यस्ता रक्तनलीहरू सामान्य अवस्थामा पुग्छन् । इन्जेक्सनका माध्यमबाट पनि यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
अवस्था जटिल बन्दै गयो र यति गर्दागर्दै पनि त्यस्ता मासु सामान्य अवस्थामा पुग्न सकेनन् भने अप्रेसनको विकल्प हुँदैन । अप्रेसन गरी बाहिर निस्किएको मासुलाई काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । नत्र यस्तो मासुले विभिन्न संक्रमण निम्त्याई अल्सर हुँदै क्यान्सरसम्म हुन जान्छ । अप्रेसनपछि पनि सचेत हुन आवश्यक छ । किनभने दिसा–पिसाब गर्दा संक्रमण हुने डरसमेत हुन्छ ।
जाडोमा अलि बढी पायल्सको समस्या देखिने गर्छ । तर, गर्मी मौसममा संक्रमण दर बढी हुन्छ । जाडोमा पानी कमी भएका कारणले पनि पायल्सको समस्या निम्तिन सक्छ ।
दिसामा रगत देखा पर्नासाथ चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । यस्तो वेला बढी मात्रामा रगत निस्किए रक्तअल्पतासमेत हुन सक्छ ।
Don't Miss it योग गर्दा के गर्ने के नगर्ने ?
Up Next कुन–कुन चिज तामाको भाडामा राख्नुहुन्न ? जान्नुहोस
यी ६ फलफूलका औषधीय गुण
१. मेवाका औषधीय गुण १. मेवाले छाला सफा र चम्किलो राख्न मद्दत गर्छ। यसमा पाइने भिटामिन ए, पपाइन जस्ता तत्वले…
‘जस्तो खायो अन्न, त्यस्तै हुन्छ मन । जस्तो पियो पानी, त्यस्तै हुन्छ वाणी ।’ प्राणीहरुले खानेकुरा ४ प्रकारले खाने गर्दछन्…
हामी दिनहुँ दाँत माझ्छौँ । जिब्रोको सफाइमा भने उति ध्यान पुर्याइरहेका हुँदैनौँ । जिब्रोमा जम्मा हुने सेतो पत्रले सास गनाउने…
नरिवल र नरिवल पानि कति उपयोगी ??
नरिवलको खेती समुद्रतटीय इलाकामा प्रशस्त हुने गर्दछ। खास गरी भारत, श्रीलङ्का, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, इष्ट तथा वेस्ट इण्डिज र मध्यअमेरिकी देशहरुमा पाइन्छ…